Ny kandidan'ny alika Alzheimer (AD drug): J147, CMS121, CAD31
/Blog/Gallery/Ny kandidan'ny alika Alzheimer (AD drug): J147, CMS121, CAD31
Posted on 02 / 23 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Inona no atao hoe Alzheimer sy Geroprotectors (GNPs)
Ny Alzheimer no anton-kevitra mampiavaka azy, dia karazana devoly izay miteraka olana amin'ny fahatsiarovana, fisainana ary fitondran-tena. Matetika dia mihamitombo tsikelikely ny soritr'aretina ary miharatsy ny fotoana, manjary masiaka mba hanelingelina ny asa atao isan'andro.Aretin'i Alzheimer kaonty 60 isan-jato ka hatramin'ny 80 isan-jaton'ny tranga miady. Ary ny taonan'ny fahanterana no tena mahatonga ny aretina, anisan'izany ny aretin'i Alzheimer (AD) sy ny homamiadana.
Ny mpitsabo mpihinan-tay, dia manam-pahaizana manokana momba ny aretina izay mikendry ny hamindra ny antony fototra mahatonga ny aretina efa antitra sy ny taona, ary miteraka ny androm-piainan'ny biby. Ny fikarohana vaovao vaovao vaovao Salk dia mamaritra ny tsy fanarahan-dia mampiavaka azy ireo, antsoina hoe geroneuroprotectors (GNPs), izay mpilatsaka an-tsokosoko AD ary mampiadana ny fizotry ny fahanterana amin'ny totozy.
Ny aretina Alzheimer
Mino ny mpikaroka fa tsy misy antony iray mahatonga ny aretin'i Alzheimer. Ahoana no ahazoanao aretina Alzheimer? Ny aretina dia mety mitombo avy amin'ny sehatra maro, toy ny génétique, ny fomba fiainana sy ny tontolo iainana. Ny mpahay siansa dia mamaritra ny antony mahatonga ny alàlan'ny Alzheimer. Na dia mety tsy hisy fiovana mety hitranga aza - ny taonany, ny tantaram-pianakaviana ary ny fahamendrehana - dia tsy azo ovaina, ny fisehoan-javatra vao haingana dia maneho fa mety misy antony hafa mety hitarika antsika.
Ny fitomboan'ny tranga mety ho tratran'ny aretin'i Alzheimer dia mihamitombo, fa ny Alzheimer dia tsy ampahany ara-dalàna amin'ny fahanterana. Raha mihombo ny risim-pahafatesana, dia tsy antony mivantana ny Alzheimer izany.
Ny ankamaroan'ny olona miaraka amin'ny aretina dia 65 sy ny zokiny. Taorian'ny taona 65, mety ho tratran'ny Alzheimer ny dimy taona tsirairay. Taorian'ny taona 85, dia efa ho ny iray ampahatelony no tratrany.
Ny tena zava-tsarotra mafy dia ny tantaram-pianakaviana. Ireo izay manana ray aman-dreny, na rahalahy na anabavy miaraka amin'ny Alzheimer dia mety hanatsara ny aretina. Mihabetsaka ny loza raha toa ka misy marary maromaro ny olona iray ao amin'ny fianakaviana.
Ny fantatry ny mpahay siansa dia tafiditra ao amin'ny Alzheimer. Ny karazana fototarazo roa dia misy fiantraikany amin'ny aretina: ny fototarazo sy ny fototarazo.
- Ratra am-bolana
Misy fifandraisana eo amin'ny lozan-doha sy ny mety hisian'ny adim-piainana. Arovy ny atidohanao amin'ny alàlan'ny fanenjehana ny fehikibo fehikibo, manao ny fiarovanao rehefa mandray anjara amin'ny fanatanjahantena, ary "miditra" ny tokantranonao.
Ny sasany amin'ireo porofo matanjaka indrindra dia mampifandray ny fahasalaman'ny salala amin'ny fahasalaman'ny fo. Manana heviny io fifandraisana io, satria ny atidoha no ampiasain'ny iray amin'ireo tambajotra saro-tahotra indrindra ao amin'ny vatana, ary ny fo dia tompon'andraikitra amin'ny fanosehana ra amin'ny alalan'ireto saka ireto.
Amin'izao fotoana izao, i Alzheimer dia eo am-piandrasana ny fikarohana biomedikalika. Ny mpikaroka dia miasa mba hamoahana ny lafiny maro amin'ny aretin'ny Alzheimer sy ny alika hafa araka izay azo atao. Ny sasany amin'ireo fandrosoana miavaka indrindra dia nanazava ny fiantraikan'ny Alzheimer amin'ny atidoha. Ny fanantenana dia ity fahatakarana tsara kokoa ity dia hitarika amin'ny fitsaboana vaovao. Maro ireo fomba fijery mety hitranga amin'ny ankapobeny.
Ny laboratoara nerobiolojia tsy miankina ao Salk dia nanomboka tamin'ny fanafody roa hita tao amin'ny zavamaniry izay nanaporofo ny endriky ny zava-mahadomelina: fisetin-koditra, vokatra voajanahary azo avy amin'ny voankazo sy legioma, ary ny curcumin, avy amin'ny tsimokaretina curry. Avy amin'izy ireo, nanambatra telo ny ekipa AD drug kandidà miorina amin'ny fahaiza-manaony hiaro ny neurônin'ny tsindrona isan-karazany mifandray amin'ny atidoha. Ny labasy dia mampiseho fa ireo kandidà telo (antsoina hoe CMS121, CAD31 ary J147), ary ny fisiahana sy ny curcumin, dia nampihena ny marika famantarana ny fahanterana, ary koa ny dementia, ary nanitatra ny fiainan'ny meday na lalitra.
Ny tena zava-dehibe, ny vondrona dia nanaporofo fa ny lalàn'ny molekiola mifandraika amin'ireo mpilatsaka an-tsokosoko AD dia mitovy amin'ny karazana synthesika roa tsara fantatra amin'ny fampiroboroboana ny androm-piainan'ny biby maro. Noho izany antony izany, ary mifototra amin'ny vokatry ny fianarana teo aloha, ny ekipa dia milaza ny fisetin-tsika, curcumin ary ireo mpirotsaka an-tsokosoko telo AD dia mifanohitra amin'ny famaritana ny maha-geroneuroprotectors.
Ny fianarana hafa ao amin'ny laboratoara dia mamaritra raha misy fiantraikany eo amin'ny taova ivelan'ny ati-doha izany. "Raha mahazo tombony amin'ny rafitra hafa ao amin'ny vatana ny fanafody, toy ny fihazonana ny asan'ny voa sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, dia azo ampiasaina amin'ny fomba fanampiny mba hanehoana na hisorohana ny aretin'ny fahanterana," hoy Schubert.
- Ny kandidan'ny alika Alzheimer (AD drug): J147
Curcumin, ny endriky ny zava-maniry indrindra amin'ny zava-mahadomelina indiana curry, dia ny fikambanana multitarget izay mampihena ny fiterahana, ny vokatra ROS, ny toxiziky amyloid, ary ny excitotoxicity, ary dia mahomby tokoa amin'ny modely hoditra AD. Na izany aza anefa, ny curcumin dia manana asa tsy dia tsara loatra amin'ny tsy fahasalamana, ny tsy fahampian'ny fizika, ary ny tsy fahampian'ny atidoha. Ho fampivoarana ny asan'ny neurotrophique sy ny fihenam-bidy metabolikan'ny curcumin, dia nampiasaintsika SRI ny fiasa simika iterative mba hanatsarana ny fananana ara-panafody nefa koa mampitombo ny heriny sy ny endriky ny asany biolojika. Tamin'ny voalohany, ny rafi-pandrefesana kôkôma maivana dia novana tamin'ny pyrazole mba hahatonga ny CNB-001, izay nanamora ny asam-pitomboan'ny asam-pamokarana sy ny tsy fandriampahalemana. Ny fandinihana ny sisin-taonan'ny vondrona PHB tamin'ny CNB-001 dia nanambara fa tsy ilaina ny vondrona hydroxyl mba hanaovana asa amin'ny fandaharam-potoana fito. Ny fanampim-panazan'ny methyl group roa amin'ny pyrazole mitambatra ny phenyl dia nitondra mankany CNB-023 ary manana hery lehibe kokoa amin'ny CNB-001. Na izany aza, ny CNB-023 dia tena lipophilic (cLogP = 7.66), ary ny fitambarana amin'ny lipophilité avo lenta dia manana lanjany maro. Mba hampihenana ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fikarakarana ny fepetra takiana fototra amin'ny asa, dia nesorina ny iray tamin'ireo vondrona cinnamyl roa ary ny fanamafisana bebe kokoa dia nitarika ho amin'ny molekiolà bitika tena goavana J147. Ny J147 dia 5-10 fotoana mahery kokoa amin'ny fandalinana ny fandikan-teny rehetra amin'ny CNB-001, raha kely dia kely na tsy misy asa amin'ny curcumin amin'ny fanandramana. Ny J147 dia tsy vitan'ny manam-pahaizana fa manana toetra tsara ara-batana (MW = 350, cLogP = 4.5, tPSA = 42). J147 (1146963-51-0) dia efa nodinihina be dia be tamin'ny modely efa antitra sy ADN izay ahitana fitsaboana miavaka tsara.
Misy olona mihevitra fa ny J147 dia mety ho simba amin'ny amine / hydrazine aromatika izay mety hiteraka aretina. Mba hijerena io fahafaha-manao io, dia nianatra tao amin'ny mikrosomena, amin'ny plasma maivana, ary in vivo ny toetran'ny metabolic J147. Naseho izany J147 (1146963-51-0) dia tsy simba amin'ny amine na hydrazine aromatika, fa ny tohatra dia miorina tsara indrindra, ary izy io dia miova amin'ny metabolita roa na telo ao amin'ny olombelona, ​​ny totozy, ny rat, ny monkey ary ny mikrosom-bovoka. Ho fandinihina ny fiarovana ireo metabolita ireo dia nampifanaraka ny metabolita telo an'ny atin'olombelona mivantana ary nanandrana azy ireo ho amin'ny asa biolojika amin'ny tetik'asa vaovao. Tsy misy amin'ireny metabolites ireny dia toaka, ary maro amin'ireo metabolites dia manana hetsika biolojika mitovy amin'ny an'ny J147.
- Ny kandidan'ny alika Alzheimer (AD drug): CMS121
CMS121 no endriky ny fisetin. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia nampiseho izahay fa ny fisidinan'ny flavonoid dia môlekiola mavitrika, mendri-pandrenesana, ary môlekiola manandratra amin'ny biby maromaro amin'ny tandindon'ny CNS. Fisetin dia mitarika antioxidant mivantana ary afaka mitazona ny haibolan'ny GSH ao anatin'ny fihenjanana. Ankoatr'izay, ny fisiahana dia samy manana ny asany amin'ny tsy fahasalamana sy ny fanavakavahana. Ity hetsika maromaro ity dia manoro hevitra fa ny fisiahana dia afaka mampihena ny fahaverezan'ny asan'ny neurologique mifandraika amin'ny aretina isan-karazany. Na izany aza, ny EC50 avo lenta avo lenta (2-5 μM), low lipophilicity (cLogP 1.24), avo ny tPSA (107), ary ny tsy fahampian'ny biositera dia manana fisafoana voafetra ho an'ny fandrosoana ho kandidà.
Ny fanamby dia ny hanatsarana ny fiasan'ny fisiahana amin'ny alàlan'ny fomba amam-panao tsy manara-penitra, ary koa ny fanovana ny toetra maha-ara-batana azy mba hifanaraka kokoa amin'ny zava-mahadomelina CNS (molekule ≤ 400, cLogP ≤ 5, tPSA ≤ 90, HBD ≤ 3, HBA ≤ 7) .Fomba maro samihafa no nampiasaina hanatsarana fisiana. Tamin'ny voalohany, ny vondrona Hydroxyl isan-karazany dia novaina tamin'ny fomba manahirana mba hanafoanana metabolites sulfate / glucuronidate mety. Nandritra ny fivoahana faharoa, novolavolaina tamin'ny quinoline ny valan-javamaniry, ary tamin'izany fotoana izany no nitazonana singa fototra fananganana fisakafoanana. Ny fampiasana ny fomba fijerin'ny zava-mahadomelina multitarget dia nampisy andian-tsainay maromaro miaraka amin'ny fihenanam-pihetsika mahery vaika amin'ny oxytose neuroprotective sy vitro ischemia. Trano fisotroana fanampiny telo no notazonina tao amin'ny doka, anisan'izany ny fikojakojana ny GSH, ny fihenan'ny lipopolysaccharide bakteria (LPS) mikendry ny mikrôlialy ary ny fiasan'ny sela PC12, ny fepetra hetsika tsy fahasalamana. Ny endriky ny flavone CMS-140 sy ny endriny quinolone CMS-121 dia ny 600 sy 400 imbetsaka kokoa, noho ny fisidinan'ny famokarana ischemia (sary). Noho izany dia azo atao ny mitazona ny toetra marobe amin'ny polyphenol iray, amin'ny fanatsarana ny fizika Ny votoatiny azo atonta printy
- Ny kandidan'ny alika Alzheimer (AD drug): CAD31
Ny voka-bary maro amin'ny CAD31 rehetra dia nahazo tombony tamin'ny sehatry ny fisorohana ny sasany amin'ireo trangan-javatra mampidi-doza amin'ny aretin'ny neurodegenerative efa antitra.
CAD31 dia kandidan'ny mpifoka rongony Alzheimer (AD) izay nofinofy noho ny fahaizany manentana ny famokarana sela avy amin'ny sela misy sela avy amin'ny sela voajanahary ary avy amin'ny tazomoka ADPswe / PS1ΔE9 AD. Mba hamindrana ny CAD-31 mankany amin'ny toeram-pitsaboana, dia natao ny fanandramana mba hamaritana ny toetra voajanahary tsy voaaro sy ara-panafody, ary koa ny fanandramana ny fitsaboana ara-pahasalamana amin'ny modely henjana amin'ny AD.
Ny CAD31 dia manana toetra voajanahary tsy misy fiatraikany ao amin'ny fandaharan'asam-pandaminana miisa enina izay miteraka zava-manahirana hita ao amin'ny atidoha. Ny fikarohana ara-tsakafo ara-tsakafo ara-panafody sy ambaratonga voalohany dia mampiseho fa ny CAD31 dia ny atidoha ary mety tsy ho azo antoka. Rehefa nokarakarain'ny antitra, ny tsimok'aretina APPswe / PS1ΔE9 AD dia manomboka amin'ny volana 10 volana ho an'ny 3 volana fanampiny ao amin'ny modely ara-pahasalamana momba ny aretina, nisy ny fihenan'ny faharesen'ny fahatsiarovan-tena sy ny aretin'ny atidoha, ary koa ny fitomboan'ny fanehoana proteinina synaptic. Ny tahiry metabolika bitika kely avy amin'ny atidoha sy ny plasma dia mampiseho fa ny fiantraikany lehibe amin'ny CAD-31 dia mifototra amin'ny fatran'ny metabolisma sy ny areti-maso. Ny fandalinana ny fanadihadiana momba ny fanondroana an-tsoratra dia nahitana fa ny CAD-31 dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny famolavolana ny synapse ary ny lalan'ny metabolika AD.
Ny vondrona mpikaroka ankehitriny dia mifantoka amin'ny fahazoana ny GNP anankiroa ho amin'ny fitsapana amin'ny klinikana. Ny fizarana derivative, CMS121, dia eo am-pelatanana ny fikarohana ara-pahaizana momba ny toetrandro izay takiana amin'ny fankatoavana ny FDA hanombohana fitsapana ara-pitsaboana. Ny famaritana ny curcumin, J147, dia eo ambany fanaraha-mason'ny FDA momba ny fanomezana alàlana hanomboka fisedrana ara-pitsaboana ho an'ny taom-piofanana amin'ny fiandohan'ny herintaona. Ny vondrona dia mikasa ny hampiditra tsimok'aretina biôzymika ho an'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny hopitaly mba hizaka ny vokatra mety hitera-pahavoazana. Milaza ny mpanao famotorana fa ny fijerena ireo mpirotsaka an-tsekoly AD dia manamafy ny modely momba ny fitrandrahana zava-mahadomelina novolavolainy ho toy ny fomba marim-pototra hanondroana fanampiny Fiombonan'ny GNP izay hanampy amin'ny fampivoarana ny fahanterana ara-pahasalamana. Izany dia mety hampitombo ny fantsom-panafody ho an'ny zava-mahadomelina ho fitsaboana ny aretina fahanterana izay tsy misy fanasitranana amin'izao fotoana izao.
Ny zavatra rehetra momba ny Trenbolone Enanthate Powder Ny fihenan'ny rongony 2,4-Dinitrophenol (DNP) dia tombony amin'ny fitomboan'ny taova
Dr. Patrick Young on Trenbolone Enanthate vovoka
Dr. Patrick Young on Avanafil vovoka
Dr. Patrick Young on SR9009 vovoka
Dr. Patrick Young on Fanondranana Nandrolone Decanoate (DECA)
Tabita on Oxandrolone (Anavar) vovoka
Oxandrolone (Anavar) vovoka
Ny fihenan'ny rongony 2,4-Dinitrophenol (DNP) dia tombony amin'ny fitomboan'ny taova
Copyright © 2018 aasraw Ny zo rehetra voatokana. Designed by www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com